सुशासनको पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ५, २०७८ उमेशप्रसाद मैनाली
सरकार र नागरिकहरूबीचको असल सम्बन्धको राजनीतिक परिवेश हो— सुशासन । यसका लागि राष्ट्रको कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, प्रणाली र परम्पराद्वारा नागरिकहरूसँग सकारात्मक हिसाबको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विकास गरेर सरकारले आफ्नो वैधानिकता सिद्ध गर्ने प्रयास गर्छ ।
यदि सरकारले राज्यका कामकारबाहीको व्यवस्थापन उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याउँछ र नागरिकहरूले खुसी तथा भलाइको अनुभूति गर्छन् भने त्यहाँ सुशासन रहेको मानिन्छ । यसविपरीत स्थिति भनेको कुशासन हो जहाँ नागरिकहरूलाई प्रजा वा शासितका रूपमा व्यवहार गरेर, उनीहरूका खुसी, सम्मान, आवाज र अधिकार खोसेर बलद्वारा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शासनसत्ताको दुरुपयोग गरिन्छ । यस्ता तानाशाह र सर्वसत्तावादीहरूको सूची लामो छ‚ जसले मानव समाजको विकासक्रमलाई नै उल्टो दिशामा लाने प्रयास गरे । राजनेताका कोटिमा पर्ने केही नेता आफ्नो देशलाई रामराज्यको रूप दिन खोजेर सधैं स्मरणीय बनेका छन् । यस्तो रूपान्तरणकारी नेतृत्व आफ्नो सोच, संयम, साहस र सम्बोधद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति दिएर सदैव आदरणीय बनेको छ । शासनको लगाम समाउनेहरूमै सुशासन वा कुशासन निर्भर हुन्छ ।
लुई चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर, लुई पन्धौंले ‘म मरेपछि प्रलय होस्’ भनेर, रुसका जार निकोलास द्वितीयले ‘मेरा चिरस्मरणीय बाबुले जस्तै निरंकुशताको सिद्धान्तको पालना गर्नेछु’ भनेर निरंकुशताको तरबार चलाए । मार्कोस, सुहार्तो, मोबुतु, डुभ्यालियरजस्ता ‘क्लेप्टोक्रेट्स’ हरूले राष्ट्रको ढुकुटी नै डकैती गरेर देशकलाई कंगाल बनाए । लोकतन्त्रको नाम जपेर कुशासन ल्याउने नेताहरू असंख्य छन् ।
सुशासन बहुपात्रहरूको साझेदारी भएकाले राज्यप्रमुख यसको खेलाडी हुने गर्छ । राज्य, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मको अहम् भूमिकाले देशको सुशासन निर्धारण हुन्छ । यीबाहेक अनौपचारिक सल्लाहकार, किचेन क्याबिनेट, स्वार्थ समूहहरूले सुशासनलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । संगठित आपराधिक सिन्डिकेट र शक्तिशाली व्यापारिक घरानाहरूले यसलाई कमजोर त पार्ने गर्छन् तर दूरदर्शी नेताहरू रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिएर परिवर्तनका सहयोगी मात्र बन्दैनन्, सफल रूपमा राज्यका सबै संस्थालाई पुनः आकार दिन र पुनः आविष्कार गर्न सक्षम हुन्छन् । यिनीहरू इतिहासका पात्र मात्र हुँदैनन्, इतिहास नै निर्माण गर्छन् ।
सफल नेताहरूको चर्चाका सन्दर्भमा सबभन्दा अगाडि आउने नाम हो— ली क्वान यु, जसले सिंगापुरलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याए । एसिया महादेशको सुदूर पूर्वमा अवस्थित, ब्रिटिस साम्राज्यको सामुद्रिक भूमिका रूपमा रहेको सिंगापुर मलेसियाली महासंघबाट सन् १९६५ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो । नयाँ देश बन्न आवश्यक पर्ने कुनै पूर्वाधार थिएन । न सेना थियो न त प्राकृतिक स्रोतसाधन । ली क्वान युले ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ शीर्षक पुस्तकमा सुरुआती दिनका संकटबारे लेखेका छन्, ‘स्वतन्त्रतापछि स्वाधीन भएर बाँच्न निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । सिंगापुर वास्तवमा पुरानो देश थिएन, यो त तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यले निर्माण गरेको एउटा सामुद्रिक व्यापारिक केन्द्र र मानवनिर्मित देश थियो । हामीले बन्दरगाहबिनाको टापु हात पार्‍यौं जसलाई शरीरबिनाको मुटु भन्दा फरक पर्दैन ।’ मलेसियाबाट छुट्टिँदा प्रतिव्यक्ति आय १,००० डलर भएको सिंगापुरको अहिले प्रतिव्यक्ति आय ८०,००० डलर पुगेको छ जुन आफैंमा ठूलो चमत्कार हो । असाधारण प्रतिभा भएका नेताहरूले जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि चामत्कारिक विकास गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण ली क्वान युले दिएका छन् ।
आखिर के रहस्य थियो त ली क्वान युको सफलताको ? यसको उत्तर उनले आफैं दिएका छन्, ‘सिंगापुर कसरी सफल मुलुक बन्यो भनेर कसैले सोधे मेरो एउटै शब्दमा उत्तर हुन्छ— दृढ विश्वास । सिंगापुर वित्तीय केन्द्र बन्ने आधार नै कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थिर, सक्षम र इमानदार सरकार अनि नीतिगत स्थायित्व नै हुन् ।’ सुरुका दिनमा लिइएका केही कठोर र अप्रिय नीतिका कारण उनको निकै आलोचना पनि भयो । इजरायलसँग सैनिक तालिमका लागि गरिएको गोप्य सम्झौताले छिमेकका मुस्लिम देशहरू मलेसिया र इन्डोनेसिया सिंगापुरको आलोचक हुन पुगे ।
ली क्वान युका स्विडिस सल्लाहकार विन्सेमियसले सिंगापुर विकास गर्न दुई सूत्र दिएका थिए— पहिलो, कम्युनिस्टबाट छुटकारा पाउने, र दोस्रो, स्टाम्फोर्ड राफेल (सिंगापुरका संस्थापक) को मूर्ति नहटाउने । लीले यिनै नीति अवलम्बन गर्दा कम्युनिस्टहरूको कडा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्ता विरोध र नरम सर्वसत्तावादी भएको आरोपबीच उनको दल पिपल्स एक्सन पार्टी लगातार सत्तामा पुग्नुमा देशको आमूल परिवर्तन र विकासमा उनको सफलता नै कारक रहेको मान्न सकिन्छ । देशमा सुशासनका लागि उनको अभियान विश्वकै लागि अनुकरणीय भएको छ । सुशासनका सबै सूचकमा सिंगापुरको उपलब्धि निकै ईर्ष्यालाग्दो छ । एउटा सूचक सरकारको प्रभावकारितामा सिंगापुरले सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म १०० प्रतिशत प्राप्तांक हासिल गरिरहनु चानचुने उपलब्धि होइन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र प्रभावकारी सरकार दिन सुरुका दिनदेखि इमानदार प्रयास भएको उनले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘१९५९ को जुनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा हामीले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता र इमानदारिताको प्रतीकस्वरूप सेतो सर्ट र सेतो पाइजामा लगायौं । जनताको अपेक्षा पनि त्यही थियो । त्यो पूरा गर्न हामी संकल्पित थियौं । सत्ता सम्हालेपछि नै हामी के कुरामा ढुक्क थियौं भने, राजस्वमार्फत संकलित एकएक डलरको हिसाब राखिनेछ र तल्लो तहको हकदारसम्म एक डलर पनि हिनामिना नगरी पुर्‍याइनेछ ।’
अख्तियारको दुरुपयोग र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग हुने क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्दै अनियमितता रोक्न सबै संयन्त्र परिचालन गरेर सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अतुलनीय सफलता हासिल गर्न सकेको छ । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा सिंगापुर ८५ अंक प्राप्त गरेर तेस्रो सबभन्दा कम भ्रष्ट राष्ट्र बनेको छ । कम भ्रष्टको सूचीमा १० भित्र पर्ने एसियाली देश यो मात्र हो । ली क्वान युको विश्वास थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निजी क्षेत्रको सरह तलब दिनुपर्छ र चुनावमा पैसाको प्रभाव पर्नु हुन्न ।
ली क्वान युको विश्वास थियो, कुनै पनि चीज सित्तैं पाइँदैन र कल्याणकारी राज्यको परिणति टाट पल्टिनु हो । यसबाहेक राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, निजी व्यवसाय र विद्यालयहरूमा योग्यतातन्त्रको अवलम्बन सिंगापुरको सफलताको आधार मानिन्छ । उनका धेरै नीतिमा असहमत हुन सकिन्छ, तर सिंगापुरको निर्माण र यसलाई ‘एसियन बाघ’ बनाउन सफल ली क्वान यु सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत भएका छन् । उनको यो भनाइ प्रेरणादायी छ, ‘सिंगापुरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पैसाबिनाको चुनावले सरकारलाई इमानदार रहन सहयोग गरेको छ । तर सिंगापुर त्यति बेलासम्म इमानदार र स्वच्छ रहनेछ जति बेलासम्म सक्षम र इमानदार व्यक्ति नै निर्वाचित हुन्छन् र सरकारमा जान्छन् ।’
एसियाको अर्को बाघ भनिने हङकङको पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत सुशासनका अन्य सूचक लोभलाग्दा देखिन्छन् । सन् १९४९ सम्म हङकङको आर्थिक र राजनीतिक वातावरण निराशाजनक थियो । अनिश्चितता र अन्धकारको त्रास छिचोल्दै हङकङ समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल भएको छ । सन् १९६० सम्म यो टापु अति भ्रष्टमा पर्थ्यो । त्यस बेला यहाँका जनतामा एउटा कहावत प्रचलित थियो, ‘बसमा चढ्ने वा यसको छेउमा कुद्ने, तर बसको अगाडि नउभिने ।’ भ्रष्टाचारसँगै जिउन सिक्नुपर्छ भन्ने यसको निहितार्थ थियो ।
सन् १९७० को संकटमा हङकङवासीले निकै दुःख पाएका थिए । तर, यसको निर्माणमा ब्रिटिस गभर्नरहरूको ठूलो योगदान छ । बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लेहोसले भ्रष्टाचारमुक्त हङकङका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको ‘आईसीएसी’ ले लिएको रणनीति दण्ड, निरोध र शिक्षाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेकाले हङकङ कम भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा हङकङ ७७ अंकसहित कम भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीको ११ मा परेको छ । सिंगापुरपछिको कम भ्रष्ट हङकङ भएको छ ।
भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारबाट जर्जर बनेको फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रुड्रिगो दुटेर्टोको फरक शैलीको रणनीति निकै चर्चित छ । भ्रष्टाचारीलाई हेलिकप्टरमा उडाएर हावामा फालिदिने भन्ने उनको उग्र भनाई समाचार बनेको थियो । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ विवादास्पद भयो । व्यवस्थित नीति, रणनीति नबनाई यस्ता बेतुकको कुरा गर्नु भनेको चर्चित हुने काम मात्र हो । सरकारमा रहनेहरूले उत्तेजक कुरा गर्नु फलदायी हुँदैन ।
जहाँ ली क्वान युले सुशासनको सफल अभ्यास गर्दै थिए, त्यहीँ छिमेकीसहित केही देशमा लुटेरा शासकहरू (क्लेप्टोक्रेट्स) राष्ट्रको ढुकुटी निजी पारिवारिक लाभका लागि लुट्दै थिए । यस्ता शासकहरूमा पहिलो नाम आउँछ— इन्डोनेसियाका पूर्वराष्ट्रपति जनरल सुहार्तोको । ठेक्कापट्टा, उद्योग, व्यापार र अन्य आर्थिक कारोबारमा उनको परिवारका सदस्यहरूको एकाधिकार नै थियो । छोरा टोमीको कार व्यवसायमा एकाधिकार, जलविद्युत्मा छोरी तुतुतको एकाधिकार, बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य छोराहरूको साम्राज्य नै कायम थियो । यसको फाइदा उठाउंदै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त थिए । मन्त्रिमण्डल पनि आफन्त र परिवारका सदस्यहरूको बनाए । सुहार्तोले छोरी तुतुतलाई समाजकल्याणमन्त्री, छोरीज्वाइँलाई सेनाको जनरलमा नियुक्त गरेका थिए । फोर्ब्स पत्रिकाले सन् १९९८ मा सुहार्तोको सम्पत्ति ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
फिलिपिन्सका मार्कोस अर्का ‘क्लेप्टोक्रेट’ थिए । उनले चुनावमा धाँधली गर्न पैसाको खोलो बगाए । भ्रष्टाचारबाट अकूत कमाए, विपक्षी नेताको हत्या गरे । जनता सडकमा आएपछि फिल्मी शैलीमा अमेरिका भागे । दक्षिण कोरियाका चुन दु हान र रो ते वु पनि भ्रष्ट नेता थिए । घूसको आरोपमा यी दुई पूर्वराष्ट्रपतिलाई जेल सजाय गरियो । चुनलाई आजीवन कारावास र रोलाई सत्र वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो । यस्तै ‘क्लेप्टोक्रेट’ मा अफ्रिकी देश जायरका मोबुतु, क्यारेबियन मुलुक हैटीका डुभालियर, दक्षिण अमेरिकी देश पारागुएका सट्रोसनरजस्ता कुख्यात शासकहरू पर्छन् । यिनीहरूले सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभका लागि देशलाई लुटेर कंगाल बनाए । यस्ता भ्रष्ट नेताहरूको सूची लामो छ, यहाँ केहीको मात्र चर्चा गरिएको हो ।
सन् १९६५ पछि राज्य बनेको सिंगापुर र हामीभन्दा पछि विकासयात्रा सुरु गरेका ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ कहाँ पुगिसके, नेपाल भने अझै अविकसित नै छ । सुशासनका सूचकहरू निराशाजनक छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा ११७ औं मा परेको छ । अझ दुःखलाग्दो कुरा त, गत वर्षको भन्दा नेपालको स्तर झन् गिरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०२० को ‘गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ का सबै सूचकको ‘पर्सेन्टाइल र्‍याङ्किङ’ मा नेपालको स्थिति दयनीय छ । आवाज र उत्तरदायित्वमा ३५.०७, राजनीतिक स्थायित्वमा ४१.५१, सरकारी प्रभावकारितामा १५.८७, नियमन गुणमा २४.५२, विधिको शासनमा ३४.१३ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ३७.९८ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २००९ सालमा बुच कमिसनको सिफारिस र राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०१३ जारी भएदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था गर्न विशेष प्रहरी विभाग गठनदेखि अहिलेको संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गठन भएका छन् ।
अहिले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सार्क क्षेत्रकै लागि अनुकरणीय मानिन्छ । यस्तो व्यवस्था हुादा पनि देश कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा झन् फस्दै गएको छ । नेपाल कहाँ चुक्यो र सफलता हात लाग्न सकेन, आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । शासकीय सफलता र सुशासनका लागि पाँच तत्त्व आवश्यक पर्ने रहेछन्— प्रतिबद्ध नेतृत्व, स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता, परिवर्तन गर्ने क्षमता, प्रभावकारी सञ्चार र दृढनिश्चय । यी सफलताका सूत्रहरूद्वारा एउटा बलियो प्रणाली स्थापना नगरी सुधारको नारा दिनु जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो ।
अहिलेसम्मका सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उल्लेख्य अभियान छेड्न सकेकै देखिँदैन । केआई सिंहले २०१४ सालमा ११० दिन सरकार चलाउँदा अलि चर्कै कुरा गरेका थिए । भवेश्वर पंगेनीको ‘डा. केआई सिंह र नेपालको राजनीति’ शीर्षक किताब र हेमनारायण अग्रवालको ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम अफ नेपाल’ मा उल्लेख भए अनुसार, केआई सिंहले ३ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ र ५ करोड ७० लाख भारतीय रुपैयाँ हिनामिना गर्ने पहिलेका मन्त्री र सचिवहरूबाट असुल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भ्रष्टाचारमा संलग्न दरबारका प्रमुख सचिवलाई कारबाही गर्न राजालाई सिफारिस गरेका थिए । ११७ जना निजामती कर्मचारीहरू उनको खोसुवाको सूचीमा परेका थिए र सेनामा समेत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनको डरले मुख्य सचिवदेखि सचिवहरूसम्म बिदामा बसेका थिए रे । तर, उनलाई नाटकीय ढंगबाट हटाइयो । उनको कदम नीति बसाल्नेभन्दा चर्चित बन्ने उत्ताउलो काम थियो र उनी असफल भए ।
जनताका विश्वासका मुख्य वाहक भनेका राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् भने त्यसपछि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र सुशासनका अन्य पात्र । यी सबै पात्रले जनताको ‘ट्रस्टी’ का रूपमा इमान्दार प्रयास गरेमा देशमा सुशासन कायम गर्न लामो समय लाग्दैन । माथिका उदाहरणहरूबाट हामीले राम्रा पाठहरू सिक्न र नराम्रा अभ्यासहरू छाड्ने शिक्षा लिन सक्छौं । हामीले स्थापना गरेका संरचनाहरूको कुशल व्यवस्थापन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरेर सरकारको वैधानिकता बढाउन सक्छौं । सरकारले नीतिगत प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न अविचलित प्रयास गरेर, जनतासामु गरिएका वाचाहरूलाई अनुभूति हुने गरी पूरा गरेर जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ । भविष्य त्यसको हुन्छ जसले आमूल परिवर्तन गर्छ न कि तिनीहरूको जसले टालटुले सुधार गर्छन् । प्रियतावादी उत्ताउलो काम गर्नुभन्दा प्रणाली बसाउन सकेमा सुशासनले जरा गाड्न सक्छ । हितोपदेशमा वर्णित यो भनाइ मननयोग्य छ, ‘जहाँ जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता एवं उदारता हुँदैन त्यहाँ बस्नु हुँदैन ।’ सुशासनको लगाम समाउने नेताहरूले जनतामा यस्तो नैराश्य उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०९:२४
माघ ५, २०७८ शिव पुरी
रौतहट — फुसको घरमा वर्षा र हिउँद कटाएका मौलापुर नगरपालिका–१ मर्यादपुरका ४५ वर्षीय जगदेव राम पक्की घरमा बस्न पाएपछि दंग छन् । नगरपालिकाले मर्यादपुर एकीकृत दलित बस्तीमा २५ वटा पक्की घर बनाइदिएको छ । राम मर्यादपुरका पुराना बासिन्दा हुन् ।
विपन्नताका कारण फुसको घरमा जीवन बिताउँदै आएका उनीलगायत बस्तीका दलित परिवार अब पक्की घरमा बस्न थाले । ‘निकै खुसी लागेको छ । जीवनमा पक्की घरमा बस्न पाइन्छ भनेर कल्पनासमेत गरेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘सोच्दै नसोचेको खुसी पाएँ ।’ शनिबार जगदेव पक्की घरमा सरेका हुन् ।
बस्तीका झन्डै १ सय ७० परिवार पक्की घरमा बस्न पाएका छन् । नगरपालिकाले दुईकोठे पक्की घर, धारा, ग्यास चुल्हो र विद्युत्का समान जडान गरिदिएको छ । बस्तीको चारैतिर बलियो ग्रिलसहितको पर्खाल लगाइएको छ । मुख्य प्रवेशद्वारमा फलामे आधुनिक गेट निर्माण गरिएको छ । एउटा घर निर्माण गर्न नगरपालिकाले ७ लाख ५० हजार खर्चेको नगरप्रमुख रिनादेवी साहले बताइन् । ‘राम्रो बास नभएर गरिबहरू कष्ट भोगिरहेका थिए । वर्षा र हिउँदमा हेर्नै नसक्ने अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा गरिबले राम्ररी सुत्न पाऊन् । राम्रो बासको आस गरेका थिए ।’
नगर गौरव आयोजनाअन्तर्गत नगरपालिकाले मर्यादपुर, चिरचिरिया, महम्मदपुर, पतौरा, मौलापुर, पथराबुधराम र नन्कार टोलमा गरिब विपन्न आवास, एकीकृत बस्ती आवास र डोमबस्ती आवास गरी ७ सय ९६ वटा पक्की घर निर्माण गरेको नगरप्रमुख साहले जानकारी दिइन् । प्रमुख साहका अनुसार उक्त घर निर्माण गर्न नगरपालिकाले ७ करोड १२ लाख ९० हजार खर्चेको छ । फुसको झुपडीमा दिन बिताउँदै आएका दलित बस्तीका स्थानीय अहिले पक्की घरमा सरेपछि मख्ख छन् ।
उक्त बस्ती शनिबार एमाले नेता प्रदीप ज्ञावलीले हस्तान्तरण गरे । दलितका लागि जमिन किनेर नगरपालिकाले सुविधासम्पन्न पक्की घर निर्माण गरेको हो । माघे संक्रान्तिको अवसर पारेर दलितलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको एमाले नेता प्रभु साहले बताए । ‘दलित बस्ती निर्माण गरेर नगरपालिकाले प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक अनुकरणीय कार्य गरेको छ,’ उनले भने, ‘मानवीय सेवा भनेकै यही हो । अब नगरक्षेत्रमा कुनै पनि दलित वा विपन्न परिवारले बासका लागि कष्ट भोग्नु पर्दैन ।’ मौलापुर नेता साहकै निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । साहले त्यस क्षेत्रका दलितलाई प्राथमिकतामा राखेको सुनाउँदै आएका छन् ।
पक्की घरमा बस्न पाएपछि आफूहरूको आत्मसम्मान बढेको स्थानीय गुल्टीदेवी रामले बताइन् । ‘घर, बास नहुँदा सधैं पीडा बोध हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब हामीसित पनि पक्की घर छ । बासको चिन्ता छैन । अब पक्की घरको मालिक भयौं ।’ नगरपालिकाले एक परिवारका लागि ७ देखि ९ धुर जम्म खरिद गरी पक्की घर बनाएको थियो । बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि बस्तीका अधिकाशले आँगनमा दियो बालेर अतिथिको सत्कार गरेका थिए । उनीहरूले आँगनमा थरीथरीका चित्रसमेत कोरेका थिए । त्यस क्षेत्रका अधिकांश दलितलाई व्यवस्थित बासको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाले योजना अघि सारेको छ ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०९:२२